Fanamafisam-peo ao amin'ny KDE | Avy amin'ny Linux
Fanamafisam-peo ao amin'ny KDE
Alf | | Fisehoana / personalization
Na eo aza ny zava-misy fa tao amin'ny KDE nandritra ny 2 na 3 volana aho dia mahita kely fotsiny izay an'ity tontolo ity.
Ny iray amin'ireo safidy natolotra, na farafaharatsiny ny mpandahatra fandaharana forum amin'ny esdebian, ary ireo forum hafa dia nilaza fa tena ilaina izy io, dia ny fanamafisam-peo, izay araky ny fotoana novakiako, dia natolotry ny mpitantana toa ny openbox sy ny sasany hafa izay tsy tiako tadidio ny anaran'izy ireo, fa manao an'io fanavahana foana io, tsy miova amin'ny KDE aho satria tsy afaka manolotra ahy io asa io.
Androany, rehefa nandinika ireo safidy fanamboarana aho dia tonga tamin'ireto manaraka ireto:
Safidin'ny rafitra> Fitondrana Window
fihetsika fikandrana, tabilao mandroso, safidio ny mozaico
ary ny vokany dia:
Ho antsika izay tsy nahalala ny momba an'io asa io dia ity izy, toa mahasoa ahy izany satria ny windows dia voalamina ho azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Fanamafisam-peo ao amin'ny KDE
Mahaliana, tsy fantatro 😀
Amin'ny kinova manaraka dia hesorin'izy ireo izany: /
Mameno ny mombamomba anao:
- Openbox dia tsy manager tiling, misy boky torolàlana ahafahanao manatratra zavatra mitovy amin'izany amin'ny alàlan'ny fanamafisana ireo masontsivana sasany fa tsy fametahana.
- Eto ianao manana ny lisitry ny mpitantana ny tile amin'ny archwiki .
Openbox dia tsy mitondra azy io amin'ny toerana misy anao, raha azonao ampidirina izany fa tsy safidy tafiditra ao, dia entin'ny mpitantana toa ny xmonad, wmfs2, musca, subtle, wmii ary mazava ho azy fa ireo mpitantana mavitrika, ao amin'ny KDE, tsy zavatra izany. vaovao, manana izany avy amin'ny kinova Mialoha ary heveriko fa amin'ny hatsarany dia toa ratsy izy ary mieritreritra aho fa hevitra tsara ny hanafoanan'izy ireo izany raha ny fahitako ny hevitr'i vicky.
Fanamarihana: mosaika no fisehoan'ny Moizy. Hamarino raha miseho ao amin'ny KDE izany, na diso tsipelina diso.
Eny tokoa, lesoka amin'ny tsipelina io, mozika io, tsy fantatro ny nanitsy azy.
Ny fametrahana ny miovaova ny tontolo iainana mba ho tsara ny rindranasa, izany hoe miaraka amin'ny lohahevitra KDE- Heveriko fa dwm na Awesome3 (na wmii, musca, scrotWM, Ratpoison, i3 na WM hafa hafa) dia safidy tsara lavitra kokoa raha hampiasa tontolo iriana. ny taila noho ny KDE, mavesatra toy inona 🙂
Marina izany, amin'ny kinova manaraka na heveriko fa amin'ny 4.10 dia hanjavona izy, satria tsy voatazona ilay kaody, saingy rehefa mamaky aho dia antenaina haverina hamboarina ho plugin ho an'ny kwin mora tazomina. Ao amin'ny bilaogin'i Martin Graesslin daholo izany fampahalalana rehetra izany.
Debian 8.0 dia hatao hoe "Jessie"